Izinambuzane, eziquka izinambuzane ezithanda imfuyo, fungicides, herbicides, ezongeziweyo (additives) kunye ne adjuvants zingasetyenziswa kuphela ngenjongo ezichazwe kwimibhalo. Ayikho kokubhaliweyo enenjongo yokubulala izilwanyana ezitya imfuyo. Akukho semthethweni ukusebenzisa imixube yezimveliso ngenjongo yokubulala okanye ukulawula izilwanyana ezitya imfuyo. Ukuthenga nokuzithengisa ngenjongo yokunika ityhefu ezizilwanyana lulwaphulo mthetho olukhulu.
Ingxaki yokuqala nethyefu kukuba ayijolisi kwisilwanyana esitya imfuyo kuphela, yiyo lonto izilwanyana ezenza umonakalo nezo zingawenziyo zingafa kuyo yonke lonto. Ukulandelelana kwiqela lezilwanyana ezitya imfuyo kungaphazamiseka, xa izilwanyana ezingeyo ngozi zisitya ityhefu, kwenza ezo zilwanyana zenza umonakalo zihambe phambili.
Ngaphandle koku, ezinye izilwanyana, ezinye iintlobo ezise mngciphekweni ezinje ngama xhalanga nokhozi zingachaphazeleka, ngokuthi zidibane ngqo okanye okanye ngezinye indlela ngetyhefu xazisitya isilwanyana ebesisele sitye ityhefu.
Iikhola Ezine Tyhefu
Ukusetyenziswa kwe khola, ezigcwele iSodium monofluoroacetate (1080) ukubulala iblack backed jackal kunye nengqawa zona azibandakanywa, ngokwe Predation Management Forum. Ayikho enye ityhefu enokusetyenziswa kwezi khola kwaye iikhola kufuneka zigcwaliswe kwaye zinikezwe ngabavelisi abasemthethweni ngokwe Hazardous Substances Act, Act 15 of 1973.
Iikhola kufuneka zisetyenziswe kuphela kwimfuyo encinci ukulawula iblack backed jackal nengqawa xa ezinye inzame zingasebenzi. Kwindawo ezihlala izilwanyana apho kukho umngcipheko omkhulu wezilwanyana ezitya imfuyo, le forum icebisa okokuba amafama afake amatakane ambalwa le khola inetyhefu ze zifakwe ebuhlantu neegusha ezindala.
Inzuzo yalendlela kukuba zizilwanyana ezitya imfuyo kuphela ezinokubamba igusha neebhokhwe zizakubulawa zikhola ezinetyhefu. Izilwanyana ezityiswe ityhefukufuneka zingcwatywe nzulu okanye zitshiswe ukuthintela ezinye izilwanyana zingafumani ityhefu.
Enye engabalwanga yi Coyote getters – isixhobo esisetyenziswa ukubulawa isilwanyana ekujongiswe kuso ngokudubula icyanide emlonyeni weso silwanya xa iphazamisa leyo kulotywa ngayo. Nangona lena iyenye yendawo ezinempumelelo yokujongana nezinja ezihambe zisitya, akusiyiyo indlela ekhethiweyo kwaye ikhokhelela okokuba nezinye izilwanyana zitye ityhefu, ingakumbi izilwanyana ezisencinci.
Amafama kufuneka afumane iimpepha mvume kwi Provincial Nature Conservation Authority ukuze asetyenziswe ikhola zetyefu okanye icoyote getters. Igunya libane miqathango phambi kokuba kukhutshwe iimpepha mvume, apho lowo une mpepha mvume kufuneka azilandele. I-Coyote getters kufuneka zifakelwe yiProvincial Conservation Department ukuqinisekisa ihambelana nazo zonke iimfuneko nemiqathango yendlela yokuziphatha.